top 5 Inta badan Kaymaha Beautiful In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > top 5 Inta badan Kaymaha Beautiful In Europe
Waxaan taxay ugu 5 kaymaha qurux badan in Europe intooda badan kaliya in waqti Holidays Season iidaya! Xiisaha loo qabo fasaxa ayaa ah inta badan kuwa jecel safarka Xeebta. Laakiin Europe leeyahay hab ka badan xeebta si ay u sahamiyaan. Nagu soo biir maadaama aan qaadan aanad cadho burburin ku hareeraysan qaar ka mid ah kaymaha ugu quruxda badan ee Europe.
Ha illoobin oo ku saabsan xeebaha isugu carruurtooda cod weyn oo raratada dhibid. Mararka qaarkood ma aad garaaci karaan nabadda iyo degganaanshaha ee kaynta ku yaal oo wanaagsan. Ahaanshaha ee dabiiciga ah, sida runta ah waa daweynta, sidaa darteed ha noo qaado boodboodi caleenta ku hareeraysan qaar ka mid ah Europe ugu fiicnaa frondescent.
Our 1aad On liiska Inta badan Kaymaha Beautiful In Europe – Bavarian Forest The, Germany
Bavarian Forest The National Park waa Germany hore iyo ugu weyn park qaranka, iyo mid ka mid ah kaymaha ugu quruxda badan ee Europe. Waa maxay sababta aad weydiisan kartaa? Waxaan qabaa racfaanka been in ay fudud cidlada weli badan. Thanks to ninkii u tagay si fiican oo keliya! park ayaa ballan ah muuqaalka breathtaking, danbow haybad (kuwa ugu caansan isagoo Grosser Falkenstein, Lusen, iyo Grosser Raaxeel), tug ballaaran iyo baaskiil tamashle, harooyinka muraayad, fursadaha isboorti, a socdaan treetop xiiso, iyo in ka badan.
Oo raba in ay qaataan qoyska on quudhin xiiso leh oo gaar ah, halka in park? Wadada gogol dhaafku wuu socdaa (Baumwipfelbad) at Bavarian Park Forest Qaranka ballan kulan ah dhow la leh dabeecadda iyo quudhin qoyska oo dhan. A 1,300 meter caqabad alwaax la maro free dheer keenaysaa booqanaya salka qubbad qaabeeya munaarad daawashada, bixiya views fantastic kaynta oo ay jidka ku. Waxa kale oo aad dooran kartaa in aad ka qayb qaataan hawlaha xiiso en wadada. Si kastaba ha ahaatee, ugu fiican waa la badbaadiyey for ugu dambeeyey. Laga soo bilaabo 44 meter sharraxaa dhawrid sare, aad hesho si aad kibis ku cuni indhahaaga on views kala go 'kaynta iyo xataa barafka u guntaday Alps.
Ulm in Tareenadu Fussen
Munich in ay Tareenadu Fussen
Stuttgart in Tareenadu Fussen
Nuremberg in Tareenadu Fussen
Ku soo dhawow cidlada duurjoogta ah! Trillemarka Rollagsfjell Nature ilaali waa mid ka mid ah goobaha ugu dambeeyay ee bikrad kaynta dalka. Kani waa go in meel loogu talagalay socodka ka mid ah koritaanka kaynta jir, barafka buuraha Sucuudiga on, iyo kalluumaysiga in r dhab ah picturesqueivers iyo harooyinka. Waxaa sidoo kale jira tiro badan oo, 93 wadar, noocyada Red qoran. Hubso in aad tug in taalada lagu magacaabo Madonna iyo ilmaha, ku yaal 100 mitir ka baxsan beerta, waayo views cajiib ah dooxada iyo wixii ka dambeeya. Keen badan oo layers, sida cimilada si wayn badala oo dhan meesha.
Park Qaranka ee Dolomites Belluno ku kordhiyay laga bilaabo dooxadii Cismon ilaa dooxadii Piave iyo la aasaasay 1990 si loo ilaaliyo dhulka this ee qiimaha dabiiciga weyn, taas oo uu horey u note gaari oo dhan qarniyo ah ee quruxda flora ay gaar ah oo ay failed. Sidaas awgeed, go'aanka waxaa loo sameeyey si ay u ilaaliyaan oo ay 32000 hektar ee Panorama ee stupendous dabiiciga ah ka isboortiga qaboobaha horumarin.
Aagga hadda waa a site dhaxal ahaan qaranka qiimaheedu inestimable halkaas oo, unbaa, xeerarka dabeecadda. Waxa aan jeclahay oo ku saabsan park this waa meesha Sucuudiga iyo Reebnaan yaa on soohdimaha Alps ee koonfur bari, taas oo jeer oo innoo arkay formation of glaciers (burburo ee la soo dhaafay in ka badan 10000 sanado kahor!).
Farqiyada u dhexeeya Tre Cime di Lavaredo iyo ka Belluno Dolomites, loo yaqaan buuraha cirro loo aaneynayo midabka ah ee rockface ah. plateaux walishka iyo rockfaces vertiginous: kuwanu waa miyuuna u ah ayaa gorgorraduna oo dahab ah, xayawaan ku dhowaad halyeeyga sababtoo ah nimcada, ay sharaf iyo haybad bararka iyada oo cirka iyo failed ee noocyada ay.
Waxaan rajaynaynaa in aan idin siiyey sababo ku filan oo ay booqasho Belluno Dolomites iyo sababta aan u malaynayaa in ay tahay mid ka mid ah kaymaha ugu quruxda badan ee Europe.
xaaladaha Jewel, France
The cajiib Parc des National Ecrins waa mid ka mid ah toban seerayaasha qaranka Faransiiska iyo labaad ee ugu weyn ka dib markii Vanoise. The 1000 aagga la ilaaliyo km sq straddles waaxda Hautes Alpes iyo Isere, iskala dhexeeya Bourg d'Oisans, Briancon iyo Embrun. park ayaa weli ah in ay meel fog iyo dabcan mahad inta badan unspoiled, waa liiska ugu kaymaha qurux badan in Europe our.
park dhul The marro buuraleyda waxaa lagu qeexaa by giringiratay glaciers iyo Wabiyadan socota soomi, kuwaas oo abuuray uga yaacday ilaa dooxooyinka cidhiidhi ah. In xagaaga, Itaaliya, climbers dhagax weyn, rookaha buurta iyo kaalinta webiga ido si park ee ku raaxaysan muuqaal cajiib ah cimilada iyo daanka hoos. Xilliga jiilaalka, snowshoeing, aqal in aqal socdaalka ski iyo buuraha waa caan. The ski miciinka of Alpe d'Huez fadhiya kaliya ka baxsan xudduudaha seeraha. taas oo ah 10 km kor switchbacks ka Bourg d'Oisans.
Our Last liiska Inta badan Kaymaha Beautiful In Europe – Forest A In A Football Stadium, Netherlands
Soo jiidashada aan go'aynin of Nature waa ku meel gaadh ah loo xirxiro tahay in isbadal garoonka kubada cagta Worthersee. Waxay ku taalaa Klagenfurt, iyo hadda waa kaynta iyo rakibaadda farshaxan!
Qiyaastii 300 geedaha, qaar ka mid ah kor u ah oo miisaankeedu yahay ilaa lix tan oo kasta si taxadir leh loo transplanted doonaa garoonka kubadda cagta ee hadda jira. Tani, in la siiyo aragti ah ee kaynta ku yaal bartamaha Yurub. Marka transplanted, kaynta qaadan doonaa on nolosha ka mid ah u gaar ah, beddelo midabada sida xilli jirsado oo soo jiidan duur-joogta.
Tag booqo ka 10 waxaan ahay ilaa 10 pm maalin kasta (free entry)!
aad diyaar inuu ku udgoonsado dhulka cusub oo ajada qoyan tahay? Si aad u raaxaysan dareen ah ee iftiinka qoraxda birqayso marayo geedaha iyo ridaya hoosku eller dhulka? Markaas bood gal Save A tareenka iyo buugga Tareen Ticket in mid ka mid ah kaymaha ugu quruxda badan ee Europe, daqiiqo gudahood!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “top 5 Inta badan Kaymaha Beautiful In Europe” gal your site? sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/most-beautiful-forests-europe/- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#kaynta #kaymaha #forresttrip #tug #dabeecadda fasaxa